Man charged for insulting Mnangagwa - Business Daily News Zimbabwe
Man charged for insulting Mnangagwa
A 38-year old Rushinga man recently appeared in court for insulting President Emmerson Mnangagwa.
Morgan Muchemwa of Rushinga in Mashonaland Central Province recently appeared before magistrate Tendai Chifamba at Mt Darwin Magistrates' Court answering to charges of undermining authority of or insulting the president as defined in section 33(2)(b) of the Criminal Law (Codification and Reform) Act.
In court, prosecutors claimed that Muchemwa publicly, unlawfully and intentionally made an abusive indecent statement about Mnangagwa on May 25, 2019 at Marymount Business Centre - blaming him for presiding over the suffering of Zimbabweans.
The unemployed Muchemwa, who is represented by Tinomuda Shoko of Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR), allegedly acted unlawfully when he told three Zanu-PF party supporters namely Hazvinei Zhiwau, Chipo Chiunje and Natty Kajengo, who were on their way to attend a political party meeting at Bopoma Primary School, that they were wasting their time in lending support to Mnangagwa and his Zanu-PF party.
Muchemwa, who denies the charge returns to court on July 22.